Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideApart | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (34024)
နေအိမ် → Yamaha → Is Yamaha developingaproduction Tesseract? RideApart
Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideApart
4 ဖေဖော်ဝါရီ 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideApart
Dailies. Galleries – မေ 26, 2011
So what does this patent mean? ကောင်းစွာ, at the very least, Yamaha has continued development of the Tesseract concept. Where that vehicle was essentiallyaflight of fancy, these drawings show that the company has been spending time refining it’s general theme into something that looks like it could be cost-effective to produce.
ကောင်းစွာ, you be the judge of that.
2012 Yamaha V Star 950 ဆန်းစစ်ခြင်း –
2012 Yamaha YZ450F & YZ250F First Looks – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဆူဇူကီး AN 650 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Moto Guzzi 1000 Daytona Injection အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဟွန်ဒါ DN-01 Aprilia Mana 850 Ducati Desmosedici GP11 စမတ် eScooter Bajaj Discover စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Brammo Enertia ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဆူဇူကီး Colleda CO Ducati Diavel Ducati 60 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် စက်ဘီး Kawasaki ER-6n